Endrika vaovao WordPress sy Lingua · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jolay 2019 3:56 GMT
Miarahaba, Jeremy mpandrafi-bika ato amin'ny Global Voices ihany ity. Vao avy nanavao ireo tranonkala rehetra ampiasaina amin'ny endrika WordPress (4.5.3) izahay ary te-hampiseho endrika vitsivitsy mahafinaritra izay nampidirina vao haingana.
Lingua: Ampifandraiso manerana ny tranonkala ireo kaontinao “sahaza”!
Efa ela ny rafitra Lingua no nanohana fampifandraisana ireo kaonty izay mifanaraka maneraka ny tranonkala ohatra, raha nandika ny lahatsoratra nosoratako manokana tamin'ny tranonkala anglisy ho amin'ny tranonkala Frantsay aho, dia ho hitan'ny rafitra fa izaho ihany ilay olona (mifototra amin'ny mailakako) ary manara-maso izany ho an'ny tanjona samihafa. Talohan'izao tsotra dia tsotra ilay endrika, ary saika tsy dia hitan'ireo mpiserasera, saingy niova izany!
Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny fitsidihana ny efijery misy ny fanovana ny horirantavanao ary hampahafantarina amin'ireo mpiserasera sahaza rehetra avy amin'ny tranonkala hafa ianao!
Ohatra iray mampiseho ny kaontin'i Sahar manerana ireo tranonkala samihafa. (natao manjavozavo ireo vaovao saro-pady)
Mahafinaritra sa tsy izany? Raha tsy mahita mpiserasera ao ianao dia tsarovy fa: mifototra amin'ny mailaka napetraka tao amin'ny kaonty ny “Fampifandraisana”! Mankanesa ao amin'ny kaontinao any amin'ny tranonkala hafa ary ataovy azo antoka fa manana mailaka iray ihany izy ireo, amin'izay fotoana izay dia hahita kaonty sahaza ao amin'ireo tranonkala roa ianao 🙂
Mazava kokoa noho ny hatramin'izay ny isan'ny lahatsoratra!
Avy amin'ny filàna hampiseho ireo isan'ny lahatsoratra amin'ny fomba mazava kokoa any amin'ny toerana samihafa ao amin'ny tranonkala ity fanavaozana “fampiraisam-bolo mpiserasera” ity, ary mampiseho azy ireo ny karazana fandraisana anjara, tahaka ny mpanoratra maro sy lahatsoratra nosoratanao tamin'ny tranonkala hafa ary nadikan'ny olon-kafa ao amin'ny tranonkala amin'izao fotoana izao. Mety tsy hahita fiovana ianao, fa ho an'ny mpiserasera sasany kosa dia hitombo ny isan'ny lahatsoratr'izy ireo raha vao ampifandraisina ny kaontiny rehetra
Ny fiovana hita maso dia ny sehatra “antontanisan'ny mpiserasera” niasana indray ao amin'ny mombamomban'ny tonian-dahatsoratra, izay mampiseho ny fitambaran'ny lahatsoratrao, ny daty farany nivoahan'ny lahatsoratrao farany indrindra, ary raha toa ka heverina fa”mavitrika” ianao na tsia amin'izany:
Mpiserasera vaovao mamoaka antontanisa avy amin'ny efijery fanovana mombamomba.
Ampiasao ny “Maodely vaovao ho an'ny Lahatsoratra” mba hanampiana haingana ny famolavolana
Manana rafitra vaovao izay miasa ao amin'ny fafana Visual an'ny mpamoaka lahatsoratra ny WP. Ahafahanao mitendry fanafohezan-teny sy manova azy araka ny HTML sahaza, tahaka ny <ul>, <h3>, ary <blockquote> Haingana kokoa ny mampiasa ny bokotra izany ary tsy miala eo amin'ny kitendry ny tananao.
Amin'ny toe-java-miseho rehetra, dia soratanao ny litera eo am-piandohan'ny tsipika aorian'ny votoaty ary mahazo fanovàna ho azy rehefa manoratra ianao. Tsindrio ny backspace aorian'ny fivadihany mankany amin'ny lahatsoratra tsy misy endrika.
* na - Manova ho lisitra <li> ao amin'ny lisitra tsy nalahatra <ul>
1. na 1) Manova ho lisitra <li> ao amin'ny lisitra nalahatra <ol>
> Manova ho block quote (mampivaingana tsonga) <blockquote>
## Manova ho lohateny ambaratonga faharoa <h2>
### Manova ho lohateny ambaratonga fahatelo <h3>
#### Manova ho lohateny ambaratonga fahaefatra <h4>
--- Manova ho tsipika marindrano <hr>
`CODE` Manova lahatsoratra eo amin'ny ` sy ` ho code block (mampivaingana kaody)<code>
Fantaro bebe kokoa ary jereo ny lahatsary momba ny fomba fiasan'izany ao amin'ny (Mametraka lahatsoratra WordPress momba ny endrika) Make WordPress post about the feature.
Ilaina kokoa ny mpanitsy rohy vaovao hanamarinana URL (rohy)
Mihatra amin'ny fafana Visual an'ny mpamoaka lahatsoratra izany. Ankehitriny rehefa manindry ny rohy ianao, dia hahazo popup (poitra eo ambony) ilaina izay mampiseho ny rohy ary ahafahanao manova azy amin'ny marika pensilihazo:
Hatramin'izay ianao tsy maintsy nanindry ny “rojon-drohy” ao amin'ny fanitsiana mba hanovana rohy, noho izany dia haingana kokoa ity. Manamora azy kokoa ny manandrana ny rohinao avy ao anatin'ny fanitsian-dahatsoratra amin'ny alalan'ny fanokafana azy ireo amin'ny hihy (fafana) vaovao, raha tsy izany dia tsy maintsy jerena aloha ny lahatsoratra mba hanamarinana fa mandeha ny rohy rehetra.
Izay no androany, manantena fa nankafy ireo endrika vaovao ireo ianao ary toy ny mahazatra, mifandraisa amiko raha misy ny olana na mihitsoka!